သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့် Android သန့်ရှင်းရေး application တစ်ခု Androidsis
ဒီနေ့ငါမင်းကိုဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်၊ ဒါပေမင့်ငါဟာဒီနေ့အထိထင်မြင်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးသူပဲ Android သန့်ရှင်းရေးအက်ပ်များ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေးသည်ရောဂါထက်ပိုဆိုးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့သင်တင်ပြတော့မည့် Android သန့်ရှင်းရေး application ကိုလေ့လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဤအပလီကေးရှင်းကိုတစ်ပါတ်အကြာတွင်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုသင့်အားပြောရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုမှု၏။
Android သန့်ရှင်းရေး application တစ်ခုသို့မဟုတ် Android Cleaner တစ်ခုထက်မကပါ။ ဤ application သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည် multitool မကြာမီသင်သိလိုက်ရင်သင်၏စက်ပစ္စည်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်မှာအနိမ့်ဆုံးဒါမှမဟုတ်အလယ်အလတ်တန်းစားရှိမယ်ဆိုရင်။
နာမည်ကိုတုံ့ပြန်သောလျှောက်လွှာ Systweak Android Cleaner၎င်းသည်လုံးဝစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်သည့်ပေါင်းစည်းထားသည့် in-app ကြော်ငြာများပါ ၀ င်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင် Google Play Store မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက် Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးသည်ဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ။
1 Systweak Android Cleaner ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Systweak Android Cleaner မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
2.1 ထိရောက်သော Junk File Cleaner
2.4 ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု option ကို
2.5 Hidden ဖိုင်ရွေးစရာများ
2.6 WhatsApp မှသိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း
2.7 Hibernate mode ကို
2.8 ဂိမ်း Mode Speedup
2.9 Application Manager
Systweak Android Cleaner ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Android အတွက် Cleaner: Phone Booster & RAM Optimizer
ရေးသားသူ: SYSTWEAK software
Systweak Android Cleaner မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
ထိရောက်သော Junk File Cleaner
၏ option ကိုအတွင်း ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းထက်မြန်ဆန်တဲ့ junk file cleaner ရှိတယ် သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုအားနည်းစေသည့်ကျန်ရှိသောဖိုင်များ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ Android ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ဒီရွေးစရာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် မလိုချင်တဲ့ဖိုင်တွေ၎င်း app သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android၊ ယာယီဖိုင်များ၊ apk ဖိုင်များ၊ အသုံးမပြုရသေးသောဖိုလ်ဒါများနှင့်ပိုမိုလေးသောဖိုင်များပေါ်တွင်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်သော application များ၏ပြင်ပသိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြီးသွားပြီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မဖျက်လိုသည့်ဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းသည်သာကျွန်ုပ်တို့အတွက်အမှတ်အသားပြုလိမ့်မည် အသုံးပြုနေသော app များ၏ယာယီသိမ်းဆည်းချက်နှင့်ယာယီဖိုင်များကိုရှင်းလင်းပါ အခုသန့်ရှင်းတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့၊ ဒီမလိုချင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုရှင်းပစ်နိုင်တယ်။
ဒီ option ထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်အတန်းများကသိမ်းဆည်းထားသောသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုဤ application ကစစ်ထုတ်သည်၊ ရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတ၊ ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ WhatsApp မာလ်တီမီဒီယာ၊ ဖိုင်ကြီးများနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်များဖြင့်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ သင့်တော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသောဖိုင်များကိုလက်စွဲဖြင့်ထိန်းချုပ်။ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Un အစွမ်းထက်ထပ်ဖိုင်ရှာဖွေသူ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၌တန်ဖိုးရှိသောအတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုနေရာကိုမသိဘဲသိမ်းပိုက်ထားသည့်မိတ္တူပွားဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု option ကို
ကျွန်ုပ်တို့ Android ၏ဘက်ထရီ၊ တိကျသောအချက်အလက်များ၏ဘက်ထရီ၊ အပူချိန်၊ ဗို့အား၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်တိကျသောနှင့်တိကျသောအချက်အလက်များကိုပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု တစ်ကြိမ်နှိပ်ရုံဖြင့်ဘက်ထရီချွေတာသုံးစွဲပါ.
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူများအတွက် option တစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုရှာဖွေပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတစ် ဦး ကို manual စီမံခန့်ခွဲမှုပြုပါ။
သင့်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင် ဒီရွေးချယ်မှုသန့်ရှင်းရေးကိုထည့်သွင်းသော WhatsApp ကို၏ beta ကို update အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ WhatsApp ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ကျန်ရှိသောကျန်ရှိသောဖိုင်များသည်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင့်အားဇိမ်ခံကားများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဤ WhatsApp ရွေးစရာကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ကသူ့လမ်းညွှန်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အမှိုက်သရိုက်အားလုံးကိုရယူပါ။ ၎င်းသည်ဖိုင်အမျိုးအစားများဖြင့်စစ်ထုတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားလိုသည့်အရာများကိုမဆုံးရှုံးစေပါ.
Hibernate mode ကို
system applications များကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ၎င်းတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် app များကိုကျွန်ုပ်တို့ hibernate ထားရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application မ်ားအား Facebook ကဲ့သို့ hibernate ပြုလုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဂိမ်း Mode Speedup
ဒါကကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်နဲ့ Samsung ရဲ့ Game Center နဲ့တူရုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိုက်မဲသည် ဂိမ်းနှင့် application နှစ်ခုလုံးကိုလျှင်မြန်သောဤအံဆွဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် SpeedUp ဂိမ်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသောလျှောက်လွှာများကိုလျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် desktop ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်မှုအဖြစ်လျှောက်လွှာများဒုတိယအံဆွဲတစ်ခုရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီရွေးချယ်မှုမှာကျနော်တို့နိုင်ပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ထည့်သွင်းထားသော application များကိုလျင်မြန်စွာစီမံပါ ရိုးရိုးလေးနှိပ်ရုံနဲ့ဖျက်ပစ်နိုင်တယ်။
ဒီ option ကကျွန်တော်၌ရှိသော add-ons အများစုကိုနှစ်သက်သည် Systweak Android Cleaner, ဤအပိုင်း၌ငါတို့ပါဝင်သောမည်သည့်လျှောက်လွှာဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏အဝင်အသိပေးချက်များကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်သောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးတော့ပါ ဖန်သားပြင်တွင်သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်အသိပေးချက်ကုလားကာပေါ်မှသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည့်အသစ်သောသတိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်ပါ။
အဲဒါနဲ့တူတယ် ယခင်ရွေးချယ်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများမှလက်ခံရရှိသည့်အသိပေးချက်များကိုစုဆောင်းမည့်အသံတိတ်အသိပေးစင်တာ, သူတို့သည်အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ၎င်းတို့ကိုတစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်း၍ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ရသောအခါ၎င်းတို့သည် ၀ င်ရောက်လာသည့်အကြောင်းကြားစာကိုမဆုံးရှုံးဘဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လျှောက်လွှာအားအသိပေးချက်များကိုဖွင့်ရန် configuration option ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကြားကာလ, လျစ်လျူရှုထားသောဒြပ်စင်များစာရင်းနှင့်၎င်းကိုမဟုတ်ပါက၎င်းအတွက်စပိန်ဘာသာစကားပါ ၀ င်သောဘာသာစကားအားပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်မှုစာရင်း။
နောက်ဆုံး More ၏အမည်အောက်တွင်ရွေးစရာတစ် ဦး ပုန်းအောင်း မိုin်းတိမ်၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒေတာ backup လုပ်ထား option ကို online backup လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆို၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ optional application တစ်ခုအား download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် option တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ Google backup ဖြင့်လုံလောက်သည်ထက်ပိုမိုပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားရန်ပင်စိတ်မပျက်ခဲ့ပါ။
တိုတိုမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် Android သန့်ရှင်းရေး application ကိုဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းသောသန့်ရှင်းရေးကိရိယာတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ၎င်းတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာများဖြစ်သော WhatsApp ကိုသန့်ရှင်းရေး၊ အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး၊ မိတ္တူပွားများအလွန်သန့်ရှင်းမှုအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးကြည့်ရှုရန်သင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏သတိပေးချက်များကိုစစ်ထုတ်ရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ကိုရန်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်ခြင်းတစ်ခု option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့် Android သန့်ရှင်းရေး application တစ်ခု
Samsung CEO ရဲ့အံ့အားသင့်စရာနှုတ်ထွက်မှု
Android မှာဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်အက်ပ် ၅ ခုသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်